मानौ बास्केट बल कोचले ५ फिट १० इञ्च अथवा त्यो भन्दा माथिको मात्र टिममा रहनसक्ने बताए भने के तपाईंको उचाई पुग्ला वा नपुग्ला त? के तपाईं टिममा समावेश हुन सक्नुहोला? अथवा ९० वा त्यो भन्दा बढी अङ्क ल्याउनेले मात्र —"ए" पाउनेछ भनेमा कक्षाको सबै जनाको यो उच्च स्तर र मागमा पुग्न अवश्य सक्दैनन्। परमेश्वरको पनि धेरै उच्च माग छ, स्वर्ग प्रवेशको गर्नको लागि। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, —जो मेरो पुत्र येशू ख्रीष्ट जस्तै धर्मी छन् तिनीहरू मात्रै मेरो पवित्र स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछन्। हामी मध्ये कति जना धर्मी छौ (रोमी ३:१०)? ___________ के तपाईं परमेश्वरको धार्मिकताको मागको नाप सम्म पुग्नुहुन्छ अथवा पुग्नुहुन्न (रोमी ३:२३)? _________________
परमेश्वरकहाँ पुग्ने एक मात्र बाटो छः "येशूले तिनलाई भन्नुभयो, ______, सत्य र जीवन म नै हुँ, _____द्बारा बाहेक कोही पिताकहाँ आउँदैन" (यूहन्ना १४:६)।
लग– आधा माना (हेर्नुहोस लेवी १४:१० - आधा माना तेल)
तपाईंसँग परमेश्वरको कति अंश छ? के एक विश्वासीमा परमेश्वरको केही सानो भाग मात्र हुन सक्छ र? अहँ, हामीहरू उहाँको थोरै भागले भरिएका छैनौं बरु हामीहरू —परमेश्वरको सारा _________________ भरिएका छौं। (एफिसी ३:१९)। हामीसँग परमेश्वरको केवल थोरै भाग छैन तर परमेश्वरको सारा परिपूर्णतामा हामीमा छ। हरेक विश्वासीमा त्यहाँ ठूलो धन छ (२ कोरिन्थी ४:७) - जिउँदो परमेश्वर आफै नै!
ट्यालेन्ट– यो हिब्रुहरू बीच सबैभन्दा ठूलो तौल हो।एक ट्यालेन्ट बराबर करिब ३००० शेकेल (लगभग ४५ केजी)। हामी २ राजा ५:२३ मा हेर्दा एक ट्यालेन्ट चाँहि एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने ठूलो भारी थियो। १ राजा १०:१० पढ्नुहोस् - यदि एक ट्यालेन्ट बराबर एक व्यक्ति बोक्न सक्ने ठूलो भारी हुन्छ भने राजा सुलेमानको सबै सुन बोक्न कति जना मान्छेको आवश्यकता पर्छ होला?___________________ प्रकाश १६:२१मा कुन चाँहि बस्तुको एक ट्यालेन्ट हुन्छ___________ के तपाईं ती मध्ये एकले हिर्काईएको चाहनुहुन्छ?__________